Lionel Messi Oo Xalay Taarikh Cajiib Ah U Dhigay Real Madrid. – SBC
Posted by SBC Editor on April 24, 2017 Comments
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa Xalay guul ka gaartay naadiga Real Madrid oo ay booqatay kulanka El Clasico ee horyaalka La Liga, waxaana ay uga adkaatay 3-2, inkastoo Real Madrid uu kaarka cas ka qaatay kulankan kabtan Ramos.
Kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid ayaa goolka la horreysay waxaana kubbad koorno ahayd oo ay iska bixiyeen ku soo abuuray markale Marcelo, oo karoos uu soo qaaday waxaa birta ku dhiftay kabtan Ramos, ka hor inta uusan 28’daqiiqo dhalin goolka furitaanka ciyaarta Casemiro.
Barcelona ayaa iska soo guday goolkaas waxaana 33’daqiiqo goolka u barbaraha u dhaliyey Lionel Messi, kaddib markii baas uu ka helay Ivan Rakitic inta ka leexsaday difaacyada Madrid shabaqa dhigay kubadda kulanka ayaana sidaas ku noqday barbaro 1-1.
Casemiro ayaa qeybta hore ee ciyaarta saddex jeer dhulka dhigay oo qalad ku galay Messi, laakiin waxaa loo taagay hal kaar oo Jaalle ah xiddigaha Barca ayaana ku dooday inay ahayd in garoonka laga saaro, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay waxaa labada dhinac la isku helay dhowr fursadood oo goolal loo filan karay oo madaxyo u badnaa.
Barcelona ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay waxaana 73’daqiiqo u dhaliyey Ivan Rakitic, kaddib markii uu shabaqa gaarsiiyey kubbad laad awoodeeda lahayd oo uu ka tuuray afka hore ee goolka Real Madrid kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 ay ku gacan sarreysay Barca.
Real Madrid ayaa la kulantay dhabar jab kale kaddib markii uu kaarka cas oo toos ah ka qaatay 78’daqiiqo kabtankooda Sergio Ramos, markii uu si xun u jilaafay Lionel Messi.
Kooxda Real Madrid ayaa la timid goolka barbaraha waxaana karoos u dadab ka soo qaaday Marcelo dabamariyey goolhayaha Barcelona 86’daqiiqo James Rodriguez oo bedel ku soo galay ciyaartay kaasoo kulanka ka dhigay gar isku mid ah 2-2.
90-ka daqiiqo ee ciyaarta ayaa soo dhammaatay waxaana kulanka lagu daray 2’daqiiqo oo dheeri ah intii lagu guda jiray labadaas daqiiqo waliba daqiiqadii ugu dambaysay waxaa goolka ay guusha ku qaateen u dhaliyey Barcelona Lionel Messi kaddib markii kubbad uu bannaanka loo soo dhigay dhaliyey kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-2 looga adkaaday Real Madrid oo mininkeeda joogtay.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa hadda wadaaga min 75-dhibcood, inkastoo Real ay haysato kulan baaqi u ah, Barca ayaana Xalay hoggaanka horyaalka ku qabtay farqiga goolasha.